Madheshvani : The voice of Madhesh - चितवनमा रगत अभाव
चितवन, १३ कार्तिक । चाडपर्व शुरु भएसँगै जिल्लामा रगतको अभाव देखिएको छ । क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्र भरतपुरका अनुसार दशैँको फूलपातीयता एक पटक मात्र रक्तदान कार्यक्रम भएको छ ।
राजमार्ग र भित्री सडकमा हुने दुर्घटनाका कारण पनि रगतको माग बढी हुने गर्दछ । केन्द्रले चितवनसहित यस क्षेत्रका १४ जिल्लामा पुगेर रगत सङ्कलन गर्दै आएको छ ।
तौल घटाउने चक्करमा कतै यस्तो गल्ती त गरिरहनुभएको छैन ?
गर्भावस्थामा सम्भोग कति उत्तम
सरकारले सिटामोल उत्पादन सुरु गर्‍यो
सी सेक्सन डेलिभरी : पैसा कमाउनकै लागि हुन्छ अप्रेसन !
नेपालबाट ट्रकोमा रोग उन्मुलनको घोषणा
गर्भनिरोधक चक्कीको गलत प्रयोग, ज्यानै जाने खतरा